ညီလင်းသစ်: အန်ဂယ်လာရဲ့ တိုင်းပြည်သို့ (၂)
Posted by ညီလင်းသစ် au 6.10.11
မြင်းကျားအကြောင်း ခုမှသိတယ်။ မြင်းကျားက အဖြူပေါ်မှာ အနက်စင်းလား အနက်ပေါ်မှာ အဖြူစင်းလားလို့ ကိုညီလင်း ရေးထားတာ ဖတ်ရတော့ ပုံကို သေချာပြန်ကြည့်ပြီး ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေသေးတယ်။ ငယ်ငယ်က အဲလို တခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးလို့။ :)
တခြားတိုင်းပြည်တွေက မျဉ်းကျားကသာ ကြိုက်သလို ကူးလူးဖြတ်သန်းလို့ ရတာပါ ကိုညီလင်းရယ် ဗမာပြည်က မျဉ်းကျားကတော့ ကြိုက်သလောက် ကူးလူးဖြတ်သန်းလို့ မရပေါင်ရှင်။ လမ်းကူးဖို့ မျဉ်းကျားနား လူရပ်နေရင် ကားတွေက ပိုတောင် အရှိန်တင်လိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်တွေ့ ... ။
မုန်လာဥတွေ နှုတ်လိုက် အာလူးတွေ တူးလိုက်နဲ့ ပျော်နေတဲ့ သားသားပုံလဲ တင်အုံးလေ။ သားသားက ကံကောင်းတယ်၊ အသက် ၄ နှစ်ပဲရှိသေးတယ် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရသွားပြီ။ ကျမဆို ခုချိန်ထိ စိုက်ခင်းထဲ တခါမှ မရောက်ဖူးဘူး။ :(
ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ ကျနော်တို့ဆီက မျဉ်းကျားတွေက အခုထိ အရိုင်းဆန်နေတုန်းပဲ ထင်တယ်နော်၊ သူ့ အနားကပ်မိတဲ့ ကားတွေက ဝူးကနဲ အရှိန်မြှင့်ပြီး ထွက်ပြေး ကြတယ် ဆိုတော့...၊း) ကျနော်လည်း စိုက်ခင်းထဲ ကောင်းကောင်း မရောက်ဖူး ပါဘူးဗျာ၊ အခုထိကို ဟုတ်တိပတ်တိ ဘာမှ မစိုက်ဖူးသေးဘူး၊
မုန်လာဥက အသာလေး ဆွဲနှုတ်လိုက်ရုံပဲလားဗျ
တောင်ငူက အိမ်မှာတော့ ကန်စွန်းဥ တူးဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ မြေကြီးထဲက ကိုယ်တူးတဲ့ထဲက ကန်စွန်းဥ အလုံးကြီးကြီးလှလှများ ထွက်လာရင် တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျ။ ဒါနဲ့ စိုက်ခင်းထဲက သားသားပုံ မပါလာသေးဘူး အကို။ မြေကြီးတွေ အပင်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ သားသားပုံလေး တစ်ပုံလောက် နောက်ပို့စ်မှာ တင်ပေးပါလား။
(အကိုလာကြည့်သွားပေမဲ့ ကျွန်တော် အပျင်းကြီးတာ လွန်သွားလို့ ဘာမှ မတင်ဖြစ်လိုက်ဘူး)
မုန်လာဥနဲ့အာလူးလိုက်တူးချင်တယ်။ အိမ်သစ်လေးကိုလဲ မြင်ယောင်ကြည့် ရင်း ရွာလေးမှာနေချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ကိုညီလင်းသစ်။
ကျမဖြင့် ခုချိန်ထိ ဗမာပြည်က စပါးခင်းကို အနီးကပ်မမြင်ဖူးသေးဘူး... စပါးပင်ကို တွေ့ဖူးချင်နေတာ... ဂျုံခင်း ပြောင်းခင်း တခြားအခင်းတွေတော့ ဒီမှာတွေ့ရတယ်လေ...
အဲဒီညက အာလူးမလေးတွေ အကုန်ဂါဝန်ချွတ်တယ်မို့လား။
သားလေးပုံ တင်ပါဗျို့ ...
မြင်းကျားပုံ က ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ.ဗဟုသုတတွေနဲ့အတူ....ပျော်ရွင်စရာ ခရိးစဉ်လေး စောင့်မျှော်အားပေးလျှက်ပါအကို...:)
ဟုတ်ပဗျာ၊ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ..၊း) မုန်လာဥ နှုတ်ဖို့က မုန်လာပင်ကို လက်နဲ့ခပ်ဆဆ ဆွဲရင်း နှဲ့ပြီး နှုတ်လိုက်တာပါပဲဗျာ၊ အဆင်ပြေတဲ့ သားပုံ ရှိမလားလို့ ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်လေ...၊
မုန်လာဥက ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ၊ အနားက ရေဘုံဘိုင်မှာ ဆေးပြီး ချက်ချင်းစားလို့ ရတာကိုး..၊း)
အေးဗျာ၊ မြို့ပြက လူတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ တကူးတက သွားကြည့်ရမယ့် ပုံပါပဲ၊ ကျနော်ကတော့ တခါလောက် လယ်ထွန်ကြည့် ချင်တယ်...၊း)
ဒီမှာလည်း ရွှေဖရုံသီး အစိမ်းရောင်တွေ ရတတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီညက ဟင်းချိုကန်ထဲ ဝင်စိမ်မယ့်နောက်တော့ အာလူးမလေးတွေ ဂါဝန်ချွတ်ရပြီ ပေါ့ဗျာ...ဟားဟား၊း)
အင်း.. ပရက်ရှာတွေ တယ်များသကိုးး)၊ ကျနော်က ဒီပို့စ်တင်ပြီး ၃ ရက်လောက် အသာနှပ်ဦး မလားလို့....၊
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျနော် ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦးမယ်..နော၊
အားပေးတာ ကျေးဇူး..၊ ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေဗျာ..၊း)
အပင်တွေ စိုက်ဖို့ကျမလည်း စိတ်ဝင်စားဘူးတယ်။
လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်တော့ မသိဘူး၊ အသီးတွေ အပွင့်တွေ ဖြစ်လာရင် ပျော်လို့ လေ။
စိတ်ဝင်စား စရာတွေကိုဖတ်သွားပါတယ် သားသား ကို မြန်မာပြည် ခေါ်ခဲ့ပါအုန်း ပိုပျော်သွားအောင်
ငယ်ငယ်က အကြီးတို့ဆီမှာ အဲ့လို စိုက်ခင်းတွေ
ရှိတယ်။ အဲ့ကို ရောက်ရင် သိတ်ပျော်တာပေါ့။
မြင်းကျား အကြောင်းလည်း စဉ်းစားမိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျမတို့ လက်သည်းနီဆိုးရင်တော့
အဖြူကို အရင်အခံဖြစ်ဆုးတာပဲ နောက်မှ အနက်လှိုင်းဖော်တာ။ သာလေးပုံတွေ တင်ပေးတော့
ပိတ်သတ်ကြီး တောင်းဆိုနေပြီး)
ကျနော်တော့ ကျေးလက်တွေကို (အလည်သက်သက် အတွက်) အရင်ကထက် ပိုပိုပြီး သဘောကျလာတယ်။
အပိုင်း ၃ မှာ ဘယ်ကို ထပ်ခေါ်သွားမလဲ စောင့်ဖတ်အုံးမယ်ဗျာ။
တောတောင် ယာခင်းတွေ သွားရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်နော်
ရိုးသားတဲ့ ရှုခင်းတွေရယ် အစားသောက်တွေရယ်ကလည်း ဆွဲဆောင်မှု တစ်မျိုးဘဲနော်။ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည်လင်ပြတ်သားနေလိုက်တာ အားကျတယ် အဲလို ပုံကောင်းလေးတွေ ရိုက်ချင်လိုက်တာ
စာတွေဖတ်တယ်. အရမ်းလှတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ကြည့်သွားတယ် စောင်မျှော်လျှက်
ဗဟုသုတလဲရတယ်။ ဖတ်လို့လဲကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ။ နောက်လည်းလာလည်ပါအုံးမယ် ခင်ဗျာ။
အသက်သာကြီးလာပေမယ့် တိရစ္ဆာန်ရုံ သွားလည်ရတာ နှစ်သက်တဲ့ အထဲ ရို့စ်လည်း ပါတယ်း) မြင်းကျားကို အဖြူပေါ် အနက်စင်းလို့ ထင်ထားတာ။ သြော်... လက်စသပ်တော့ အနက်ရောင်ပေါ် အဖြူစင်းကိုး။ လိပ်ကြီးတွေက ချစ်စရာကြီးနော်။ လိပ်တွေ နှေးကွေးပုံကို ကြည့်ပြီး ကိုညီလင်းပါ ငုတ်တုတ်မေ့သွားတယ်ဆိုလို့ ပြုံးမိသေး ခိခိး) စိုက်ခင်းလေး ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာနော်။ ဒီမှာလည်း နွေဆို တနိုင်တပိုင် မြေကွက်လေးတွေမှာ စိုက်ကြတယ်။ သားသားသူရိယတော့ သိပ်ပျော်နေမှာပဲနော်။ ကိုညီလင်းနဲ့ ဇနီးလည်း ခရီးထွက်ရတာ စိတ်လက်ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင်တာပေါ့။
နောက်တစ်ခါသွားရင် ညီ့ကိုလည်းခေါ် အစ်ကိုရေ့ အားကျလို့ ဓာတ်ခဲတွေ လဲရပေါင်းလည်းများပြီး)
သတိရတယ် အမေ နေမကောင်းလို့ အိမ်ပြန်သွားလိုက်သေးတယ် အစ်ကို မနေ့ကပြန်ရောက်တယ် ။ သားအကြောင်းလေးတွေလည်းရေးပါအုံး သတိရတယ် ၀က်ဝံပေါက်လေးကိုလည်း ။
ကျနော်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက စိုက်ခင်းထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့ဖူးတယ် ။ အိမ်နောက်မှာ အဖေ က မုန်လာဥနီ ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ နံနံပင်တွေ အပျော်စိုက်ထားဖူးတယ် ။ မာလီဦးလေးက ဘယ်အပင်ကိုဘယ်လိုစိုက်ရတယ် ၊နုတ်ရတယ် ဆိုတာသင်ပေးဖူးတာကို ဒီအရွယ်ထိ မမေ့ဘူး။
သဘာဝမှာပျော်တတ်တဲ့ စိတ်ကို အဖေက သင်ပေးခဲ့တာ။
ပျော်စရာ၊ ဗဟုသုတရစရာ ခရီးလေးဖြစ်မှာသေချာတယ်..။
သားသားကို သဘာဝနဲ့ တွေ့ထိပေးတာ အရမ်းသဘောကျတယ်။ အိမ်က သားပြည့်က တစ်နေ့က စာကျက်ရင်း " ကန်စွန်းဥက မြေအောက်ပင်စည်မှာ အဆာသိုလှောင်တယ်တဲ့၊ အမြစ်မှာ အဆာသိုလှောင်တာ မဟုတ်ဘူးလား မေမေ" လို့ မေးလာတော့ ကျွန်မမှာလေ ကန်စွမ်းဥခင်းထဲ ခေါ်ပြလို့ရရင် ခေါ်ပြလိုက်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ပေါက်လာတယ်။ တကယ်က ကျွန်မကိုယ်တိုင် စာတွေ့ဘဲ သိခွင့်ရခဲ့တာလေ။ သေချာ ဂဃနဏ မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ သိချင်စိတ်တွေကို လက်တွေ့နဲ့ ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်ရင် သူတို့ တစ်သက်လုံး မှတ်မိသွားတာမျိုး ဖြစ်စေချင်မိတာ..။
ပြောချင်တာတွေ မေးချင်တာတွေ အကုန်လုံး အပေါ်က မောင်တွေ ညီမတွေ ပြောပြီး မေးပြီး သွားကြပြီ... (အန်တီက အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ တခါတလေတော့အချောင်ခိုခွင့် လေး ပေးပါနော်...)
တခုပဲ ထပ်ပြောသွားချင်တယ်... မြင်းကျားတွေ မုန်လာဥနီတွေနဲ့ပျော်နေတဲ့ သားလေး ဓါတ်ပုံ ကြည့်ချင်တယ် လို့ ... :-))
ဖတ်ရတာစိတ်တွေသိပ်လတ်ဆတ်တာပဲအကိုရေ .အာလူးပင်ကိုခုမှမြင်ဖူးတယ် .တောင်ပေါ်သူပေမယ့်သိက္ခာကျထှာ .အားလူးပင်မတွေ့ဖူးလို့
လိပ်ကိုမြင်တော့ ကလေးလိုခဲနဲ့ထုကြည့်ချင်တယ် .
အကို့သားဆော့တာမပြောနဲ့ ဒိုးကန်တောင် လိုက်ကဲချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်
ပုံတွေက တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခရီးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ပုံနဲ့ ရေးထားတာတွေက တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ သားလေးက အမှတ်တမဲ့ကြည့်တော့ ဥရောပ ကလေးလေးပဲ အောက်မေ့နေတာ။ မုန်လာဥနီ အပင်ကို ခုမှပဲ မြင်ဖူးတယ်။ ဘုန်းဘုန်းက တောသားဆိုပေမယ့် ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်မှာ မစိုက်ကြတော့လေ။
မြင်းကျားမှာ အဖြူပေါ်မှာ အနက်စင်းလား၊ အနက်ပေါ်မှာ အဖြူစင်းလားဆိုတာ မတွေးခဲ့ဖူးဘူး။
လိပ်ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက အတော်ထူးဆန်းတယ်နော်။